ချောကလက်၏အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ - Afrikhepri Fondation
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာ 26, 2021
Vနှစ်ပေါင်းများစွာငါအံသွားခဲတဲ့ချောကလက်ကိုလေးထောင့်ကွက်ပေါ်မှာငါထားခဲ့တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းကြံစည်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်၌အမြစ်တွယ်နေပြီး၊ ချောကလက်သည်သင့်ကို ၀ က်ခြံဖြစ်စေသည်ဟူသောအယူအဆ၊ ကယ်လိုရီ၊ ကိုလက်စထရောနှင့်မြေဆီလွှာများအကြောင်းမပါပါ။ တားမြစ်ချက်များမှလွတ်မြောက်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ ချောကလက်အလှကုန်ပစ္စည်းများသည်ဆေးဆိုင်များတွင်ပေါ်လာလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်မှာမဆိုးပါဘူး။
ချောကလက်အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ကိုကိုးအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဆိုပါက“ ချောကလက်” ဟူသောစကားလုံးသည်“ ကိုကိုး” ထက် ပို၍ ကာယရေးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကိုကိုးတွင်ဗီတာမင်အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ အီးနှင့်ဓာတ်သတ္တုများ - ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ သံ၊ အုန်း၊ ငါဘာလို့နောက်တဖန်ချောကလက်ကိုမစားခဲ့တာလဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဝက်ခြံ ...
ယနေ့အာဟာရပညာရှင်များကချောကလက်ကိုနေ့စဉ်အလွဲသုံးစားလုပ်ရန်အကြံပြုချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကြံပေးသည်။ ဤသည်ချောကလက်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ သင်စတင်သည်နှင့်ရပ်တန့်ရန်အမှန်တကယ်ခက်ခဲသည်။
သတိ အဝလွန်ခြင်း (စွမ်းအင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း) သို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါ (သကြားနှင့်အဆီများများစားစား) ခံစားနေရသောသူများအတွက်ချောကလက်ကိုမထောက်ခံပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနိမ့်ကယ်လိုရီဓာတ်စာကိုလိုက်နာသူများအတွက်အကြံပြုသည်။ အလျင်အမြန်သိမ်းသွားခြင်း၊ ချောကလက်သည် ဦး နှောက်ကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုချက်ချင်းခံစားစေသည်။ ချောကလက်တွင်အမည်းရောင်ညံ့ဖျင်းသော glycemic အညွှန်းကိန်းရှိကြောင်းကိုလည်းသိထားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုအဆက်မပြတ်ထိန်းထားပေးပြီးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းစတင်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည်။
သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်ဖြစ်သော“ ချောကလက်မစားပါနှင့်၊ အခေါင်းပေါက်များလှုပ်ရှားလိမ့်မည်” လှုပ်ရှားမှုဖြင့်သင်၏ကလေးများအားယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ကိုကာကိုလာတွင်အပြားကြီးထွားမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အခေါင်းပေါက်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် Colgate ချောကလက်များအတွက် spearmint လဲလှယ်မဟုတ်သနည်း
ကိုကိုးတွင်ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည်။ ကော်ဖီထက် ၁၀ ဆနည်းသော်လည်း၊ စိတ် ၀ င်စားစရာနောက်ထပ် theobromine လည်းပါဝင်သည်။ သေးငယ်သောဆေးများဖြင့်ပါ ၀ င်သည့်ဤအရာ ၀ တ္ထုများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်စာမေးပွဲသို့မဟုတ်အထူးကြပ်မတ်အလုပ်တွင်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ကိုကိုးသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းများ (theobromine နှင့် serotonin) တို့ပါ ၀ င်သည်။ ချောကလက်သည်စိတ်ကျရောဂါကိုသက်သာစေသည့်အပြင်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသက်ရောက်မှုများသည်ချောကလက်ကိုယ်နှိုက်သို့မဟုတ်မည်သို့ခံစားရပုံရှိမရှိမသေချာသော်လည်း၎င်းသည်အရေးမပါပါ။ ချောကလက်စားခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုသည် endorphin တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခြင်း၊ ပျော်မွေ့ဖွယ်ဟော်မုန်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဒါ့အပြင်ချောကလက်စက်ရုံတစ်ရုံထဲကိုဝင်သွားတာကမင်းကိုပိုပျော်ရွှင်စေတယ်။
၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းသင်၏စကေးပေါ်ရှိအပ်ပြproblemsနာများအားလုံးကိုသင်စွပ်စွဲသောဤချောကလက်တွင်ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် cellulite ကိုလျော့ကျစေပြီးအသားအရေကိုပိုမိုနူးညံ့စေသည်၊ လိမ္မော်ခွံအသွင်အပြင်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
မှားယွင်းစွာနားလည်ခြင်းနံပါတ် (၁) ကိုရပ်တန့်ပါ။ ဝက်ခြံသည်ဟော်မုန်းအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းချောကလက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ YOUPIIIIIIII! သတင်းကောင်းကိုကြားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။ ငါ့မှာပိုကောင်းတယ် - ကိုကိုးထောပတ်မှာပါတဲ့ lipids တွေကအရေပြားပေါ်ကအရေပြားကိုအာဟာရဖြည့်ပေးတယ်။ ကိုကိုးသည်အနာပျောက်စေသောဂုဏ်သတ္တိရှိပြီးအထူးသဖြင့်လမ်းပိုင်းအမှတ်အသားများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်တိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အထူးထိရောက်သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး content များအတွက်လူသိများသောလက်ဖက်ရည်ထက်ပိုကိုကိုး Anti-အိုမင်းလိမ်းဆေးထဲမှာအလှကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းကအသုံးပြုလျက်ရှိသော Anti-အခမဲ့အစွန်းရောက်ဓါတ်တိုး polyphenols, ကြွယ်ဝနေသည်။
သငျသညျလိုအပ်ပါတယ် ... မှောင်မိုက်ချောကလက်2ရင်ပြင်, ဒါရဲ့! သတိထားပါ၊ အရည်အသွေးကောင်းချောကလက်ကိုသာသုံးပါ။ ၁၀၀% သန့်စင်သောကိုကိုးထောပတ်ဖြစ်မည်၊ ဓာတုပစ္စည်းများထပ်ထည့်ထားခြင်းမရှိကြောင်းသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းကိုကိုကိုးများသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရွေးပါ။ %) ။ သငျသညျလိမ္မော်ပွင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီတစ်စက်ထည့်နိုင်သည်။ နှစ်ဆသောဘွိုင်လာထဲရှိချောကလက်ကိုအပူပေးပါ။ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်ရောစပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောင်ကျွမ်းခြင်းမှရှောင်ရှားရန်, မုန့်စိမ်းသည်အလွန်ပူနွေးသည်အထိအေးမြစေပါ။ မျက်နှာပေါ်တွင်မိနစ် ၂၀ ခန့်လိမ်းပြီးကောင်းစွာဆေးပါ။ အရေပြားအာဟာရများနှင့်ပြည့်နေသည်
အဓိကအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကိုကိုးးအခြေခံစောင့်ရှောက်မှုလိုင်းများကိုတီထွင်နေကြသည် Beauty Shop, Sephora, Sensation Chocolat …စူပါမားကတ်စင်များပေါ်တွင်ချောကလက်အလှကုန်ပစ္စည်းများပင်ရှိသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအပြစ်များကိုငြင်းပယ်ခြင်းသည်မှားသည်။ တစ်ခုလုံးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အမျိုးသမီးဖောက်သည်ပြီးသားဤထုတ်ကုန်စွဲခြင်းနှင့်စွဲနေသည်။
သိပ္ပံပညာသည်ချောကလက်၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အချို့သောရေနှံနှင့်စိတ်ကြွဆေးကုထုံးများသည်၎င်းတို့ကိုကုသမှုအမျိုးမျိုးတွင်ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။ ချောကလက်ကုထုံးအသစ်တစ်ခုကိုမွေးဖွားလာသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုချောကလက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှိပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်ဆက်နွယ်သည်၊ သင့်ကိုကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်စေသည်။ နူးညံ့သောအသားအရေ ယနေ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိအဖွဲ့အစည်း ၂၀၀ ကျော်သည်ကိုကိုးအခြေခံအလှအပကုသမှုကိုကျင့်သုံးကြသည်။ အကယ်၍ သင်စမ်းသပ်ပြီးသည်မှန်လျှင်နာမည်နှင့်လိပ်စာကိုမမေ့ဘဲပြောပါ။
SOURCE မှ: http://secretsdebeautes.over-blog.com/article-secrets-de-beautes-du-chocolat-42877261.html
ကိုကိုးအဆီ 100g - ၁၀၀% သန့်စင်ပြီးသဘာဝ - မသန့်စင်ဘူး - အရေပြားအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော - ဆံပင် - ...
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးစက်တင်ဘာ 26, 2021 ရက် 11:21 pm တွင်
Ladius Quietus, gladiator ရုပ်ရှင်မှုတ်သွင်းသူအာဖရိကနွယ်ဖွား၏ရောမဗိုလ်ချုပ်ကြီး
Shock မဟာဗျူဟာ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၀)